युगसम्बाद साप्ताहिक - भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ?
Tuesday, 11.12.2019, 07:19am (GMT+5.5) Home Contact
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ?
Thursday, 06.22.2017, 12:14pm (GMT+5.5)
सर्वसाधारणलाई कानुनी मर्यादा सीमाभित्र हिंडाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसका लागि सरकारमा हुनेहरू स्वयं मर्यादा सीमाभित्र रहे मात्र जनताले पत्याउँछन् र अनुशरण गर्छन् । तर, सरकार चलाउनेहरू नै छाडा हुन्छन् भने अरु कसैले पनि मान्दैनन् । आजको स्थिति भनेको अराजक स्थिति हो । ‘यथा राजा तथा प्रजा’ भनेजस्तो छ आज । सत्ता र शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुने स्थिति छ आज । एउटा आउँछ, आफ्नो प्रयोग गर्छ । अर्को आउँछ र अर्को प्रयोग गरेर जान्छ । विज्ञसितको परामर्श, उचित सोच विचार केही छैन । ‘आए आँप गए झटारो भनेझैं छ । देशको बस्तुस्थिति, परम्परा र जनचाहना विचारै नगरी आफ्नै लिंडे ढिपी लाद्छन् । प्रयोग र परक्षणमै देशैलाई समाप्त पार्ने हुने कि भन्ने जगजगी भैसक्यो । सुरुमा संसदीय व्यवस्थाका संचालकको उन्माद खपिनसक्नु भएपछि पंचायत आयो । त्यसले आधारभूत विकास निर्माणको जग बसालेको हो, तर मनपरी गर्ने बानी बसेकालाई पचेन । त्यसैबेला दशवर्षे आतंक पनि भोग्नुपर्याे । आज संघीय व्यवस्था परीक्षणमा छ । यो पनि ‘बाख्राका मुखमा कुभिण्डो’ हुने हो कि ! कहिले हो, कतिसम्म हो भन्न सकिने स्थिति रहेन ।
भरतपुर मेयर निर्वाचनको मतपत्र गणना गर्दागर्दै माओवादीले छापामार शैलीमा ९० थान मतपत्र च्यातेर कामै नलाग्ने बनाएपछि गणना रोकियो । यहाँ विचारणीय के भने– उनीहरूले तीमतपत्र किन च्याते ? किन कि ती मतपत्र माओवादी उम्मेदवारका पक्षमा रहेनछन् । आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा भए किन च्यात्थे । माओवादी उम्मेदवारभन्दा एमाले उम्मेदवार ७३३ मतले अघि भएको बेला मतपत्र च्यातिएका छन् । आफ्ना उम्मेदवारले हार्ने देखेर नै प्रतिद्वन्द्वीका नाममा परेका मतपत्र च्यातिएको बुझ्न सकिन्छ । यो स्थितिमा बेइमानी नगर्ने हो भने ती च्यातिएका मतपत्र एमाले उम्मेदवारका पक्षमा जोडिनुुपथ्र्यो र जनमतका मतपत्र च्यात्नेलाई हदैसम्मको सजायका भागी बनाउनुपथ्र्यो । तर, यहाँ त ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सूली’ भनेझैं मतगणना नै स्थगित गरी पुनः निर्वाचनको आदेश दिइयो । यो सत्तापक्षीय उम्मेदवारका पक्षमा अन्धरनगरीको इन्साफ जस्तो यो । यही एउटै उदाहरणबाट पनि यो देश कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । पुनः निर्वाचनका नाममा धाँधली गरेर आफ्नै उम्मेदवालाई जिताउने सत्तापक्षको षड्यन्त्र बाहेक यो अरु केही होइन भनेर आम जनताले भनिरहेका छन् ।
नेताहरू नै इमानदार नभैदिनाले यहाँ सबै खलबलिएको छ । संघीयता अराजकता निम्त्याउन होइन होला नि ? जुनसुकै भाषा, धर्म, संस्कृतिमा समन्वय ल्याएर देश र जनताको हित हेर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नै पक्षको मात्र हित हेर्दा अव्यवस्था र स्थिरता आउँछ भनेर ख्याल गरेको पाइँदैन । कतिपयले निर्वाचन जित्ने वित्तिकै विना सोचविचार, विनायोजना म यो गर्छु र त्यो गर्छु भने । कसैले वृद्धभत्ता बढाउँछु भने । काठमाडौंका मेयरले सरकारी लेखापढीको भाषा नेवारीलाई पनि बनाउँछु भने । उनलाई मत दिने नेवार मात्रै त होइनन, अरु भाषाभाषी पनि त थिए भने अरु भाषालाई पनि त स्थान दिनुपर्याे नि । संघीयताका नाममा भाषा र धर्म अनि जातजातिबीच कचिंगल ल्याउने काम राम्रो हो त ? जुनसुकै पार्टीबाट जिते पनि निर्वाचित मान्छे सबैको प्रतिनिधि भैदिनुपर्छ । काठमाडौं अलग देश त हैन होला ? स्थानीय तहले मनलागेको जे पनि गर्न पाउने त हैन होला ? कानुन पनि चाहिएला । राज्य चलाउनले परसम्म हेर्नुपर्दछ । त्यसैले यो संघीयता छचल्किएर कतै भुईमा नपोखियोस् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सात दशककाबीच चालीसजना प्रधानमन्त्री हुनु भनेकै लाजमर्दो स्थिति हो । राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको यो अव्यवस्थाको मूल कारकतत्व भनेको नेताहरूको काँचोपन र इमानको कमी पनि हो । नेताहरू इमानदार भैदिएका भए आजको दुःस्थिति नै आउने थिएन र देश धेरै अगाड हुनेथियो । देशको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेर, जनतामा भिजेर काम गर्नुपर्नेमा यहाँ जनतालाई झुयाएर ढाँटछल गरेर सत्तामा पुगेर मनोमानी गर्ने एकसूत्रीय नीति लिइनाले दुष्परिणाम भोग्नु परिरहेको छ । राजनीतिक प्रदूषणको यो महामारी कहाँसम्म फैलियो भने सत्ताको कुर्सीका निम्ति जुनसुकै बिरुद्धसंयोगी गठबन्धन गरेर भए पनि सत्तामा टाँस्सिइरहने प्रवृत्तिले स्थायी रुप लिन थाल्यो । आजको भ्रष्ट आचरणको विगविगी पनि त्यसैको परिणाम हो र नेतृत्वको परित्रमा सुधार नआएसम्म सुधारको सम्भावना क्षीण नै छ । किनभने मन्त्रिमण्डल बदलिन्छ, मान्छे बदलिंदैन ।
यो देशमा अनौठो हुँदैछ । गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नुपर्ने काम पहिले हुँदैछन् । केही नजाने पनि तातो न छारो जानेको अभिनय गर्न खप्पिस नेता आफ्नो धोती फुस्केको पनि थाहा पाउँदैनन् या थाहा पाए पनि लाज पचाउँछन् । ‘ठाउँ न ठहर बुढीको रहर’ भनेझैं काम देखाएर स्याबासी खान र संगमर्मरमा आफ्नो नाम कुँदाउन एउटाले शिलान्यास गरेको ठाउँमा अर्काले फेरि शिलान्यास गर्छन् । यहाँ बिनापूर्वाधार जथाभावी महानगरपालिका, उपमहानगपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गठन गरेर हाँस्यास्पद काम गरे । न कार्यालय भवन छन्, न भवन बनाउने जग्गा छ । ‘आफू छारामा खुट्टा भने आरामा’ भनेझैं निर्वाचित प्रतिनिधिले शपथग्रहण गरिसके । कर्मचारीको खटनपटन अझै भैसकेको छैन, तैपनि होला नै भन्नुपर्याे । तिनीहरूले कहाँ बसेर काम गर्छन् ? शहर–बजारमा त भाडाका घर पाइएलान्, तर गाउँमा त सम्भव छैन । त्यहाँ त गोठ–कटेरा–खोल्मा खोज्दै हिंड्नुपर्ने होला । ‘छोरो नपाउँदै कन्धनी बाट्ने’ भनेको यस्तैलाई हो भन्दैछन् जनताले । हुन पनि गर्नुपर्ने काम मेसैसंग पो गर्नुपथ्र्यो । बिना अड्कल हावामा तरबार चलाए जस्तो भएको छ ।
त्यसैले परिवर्तनका जस्तासुकै प्रक्रिया र कार्यक्रम अघि सारे पनि नेता र जनप्रतिनिधिका मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म केही हुनेवाला छैन । सोर्स–फोर्स, नातागोता, राजनीतिक पक्षधरताको आधार अनि चन्दा, उपहार, विकास सनर्माण योजनाहरूमा भन्सार दस्तुरीकै रुपमा प्रचलित कमिशन धन्दा नरोकिएसम्म नाम फेरेर संघ–प्रदेश–स्थानीय तह भन्दैमा केही हुँदैन, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण मात्रै हुने हो । यो व्यवहारिक वस्तुतथ्य बुझेर नेता र पदाधिकारीहरूमा आत्मसंयम नपलाएसम्म कानुनी प्रक्रियालाई नै बलियो बनाएर शासनमा दृढता ल्याउनुपर्छ । अन्यथा ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ हुनु निश्चित छ । सुधारका डीङ हाँक्नेहरूले तुनामा बाँधेर राखेहुन्छ ।